Kushambadzira Metric Izvo Zvakakosha | Martech Zone
Kushambadzira Metric Izvo Zvakakosha
Chipiri, January 21, 2014 Douglas Karr
Pardot akaisa pamwechete izvi kushambadzira metric kubiridzira pepa izvo zvave zvichigadzira ari kutenderera.
Kushambadzira kwanhasi analytics vane simba. Vashambadziri vane mukana kune ese marudzi emametric, kubva pakuona peji uye nhamba dzevateveri kune zvimwe zvinoratidzira huwandu hunosanganisira zvinotungamira nekutengesa. Nekujeka kuri kukura mukushambadzira data, zviri nyore kubatwa mune data iro - kazhinji kazhinji kwete - risiri kukanganisa mari yako. Vatengesi vanofanirwa kutarisa pane metric izvo zviri nani zviratidzo zvekutengesa uye kushambadzira kubudirira. kuburikidza Pardot
Ini ndine kumwe kunetseka nezve mamwe ma metric Semuenzaniso, ini handione kukurukurirana kwekukosha pamutengi kana kuchengetwa kwevatengi. Sezvo isu tichitarisa kukura kwedu email kushambadzira - semuenzaniso - isu tinofanirwa kunzwisisa iyo yekukwezva uye yekuchengetedza chiyero cheedu runyorwa rwevanonyoresa. Isu tinoona pakati pe3% uye 5% yeedu runyorwa achichinja yega yega vhiki vanhu vachisiya mabasa kana kungochinja email kero. Izvi zvinoreva kuti kuti tirambe tichikura kwedu kunyoreswa base, isu tinofanirwa kushingairira kusimudzira uye kukunda iyo kushomeka. Isu tinodawo kutarisa chero shanduko inoshamisa mukuchengetwa kwemutengo ...
Kushaikwa kwemametric metric kunotyisa futi. Isu tinowanzoona vatengi vachikwikwidza kana stats yavo ichidonha - asi dzimwe nguva mwaka unokanganisa munhu wese nevatengi vedu vachiri kuwedzera mugove wavo wemusika. Kune akati wandei mamwe metric ane basa (uye nzira dzekutengesa idzo dzinokosha)… asi ndinofungidzira uku kutanga kwakanaka.
Tags: chinzvimbo chekushambadzirabounce ratetinya kutungamiratinya-kuburikidza chiyeroakavhara madhirimutengo wega wegamutengo pakubayamutengo pamutungamirictrmwero wekutoravateverishamwariMatsimbakutungamira mhandozvinoisalead inogadzirwametrics ekushambadzirachiyero chakavhurikaruregererombirumaitiro ekutengazvokusumwaretweetmugovekugovana stats